Olee otú ime Harlem Shake Dance
Olee otú ime Harlem Shake
Harlem shake bụ a na-agba egwú na-agụnye-akpụ akpụ akụkụ ahụ gị na a zipụta ha n'usoro n'ụzọ na-esonụ ụfọdụ ịke, na-emekarị nke music ma ọ bụ a kwaa. Ọ bụ fun na-akpali agba egwú na-ewe ihe na-erughị sekọnd 30 na-enweghị set nke iwu na ịgba egwú; ọ bụ naanị n'ikwe ma na-aga ọhịa na ahụ gị na-Nkea. The Harlem Shake agba egwú sitere na 1981, na nwoke onye na-aga site na aha "Al B," dị ka Uproxx. The oge ochie Harlem Shake aka pivoting otu ubu mgbe n'out oge popping si ndị ọzọ. Harlem shake-agụnye ojiji nke ekike site dancers.
Nkebi nke 1: History of Harlem Shake
Part 2: More Facts banyere Harlem Shake
Nkebi nke 3: Olee otú ime Harlem Shake
Nkebi nke 4: Top 10 Harlem Shake YouTube videos
Al B, bụ nwoke na-eji na-agba egwu n'oge oge izu na egwuregwu si Nkata Omuma na Rucker Park na Harlem ebe ọ bụ na 1981, ka o toro ukwuu nke Internet otuto maka echepụta mbụ Harlem Shake, a na-agba egwú na-apụta dị ka anụ jerking nke ogwe aka na elu akụkụ nke ahu. Al B kwuru na-agba egwú sitere mummies n'Ijipt n'oge fero, ndị a mummies kwara ha elu nke ozu ha n'ihi na ha na-enweghị nnwere onwe iji ha aka na ụkwụ ma ha enweghị ike n'ezie akpali. Niile ha nwere ike ime bụ n'ikwe. Ya, e nwekwara zoro dị ka a drunken agba egwú, onye aṅụrụma shake, ma ọ bụ ihe dị egwu, onye obula hụrụ ya n'anya na onye ọ bụla na-enwe ekele ya.
Ndị ọzọ chepụtara na-egosikwa na Harlem shake mbụ e na-akpọ "nwaanyị akwụna ikwanye". Ọ na-mgboonu ji azụmahịa ndị ikom ga-aga na njem, ma bulie a hooker, ma mgbe ụfọdụ ihe ga-aga na-ezighị ezi na hooker na-adọbi n'ime ọdịdọ. Mgbe e mesịrị, ọ nweela ewu ewu mgbe ndị ikom ga-eji a ụbọchị n'ike ọgwụ na mfe inyom, ma nke a ngwakọta nke ọgwụ na mmanya ga-eme ka a-eme ihe ike ọdịdọ. N'oge rie adaka ọgwụ na-adọ, aha ghọrọ usoro ihe na-maara dị ka "Harlem ikwanye" na ya mgbe ahụ wee laghachi dị ka ihe iberibe YouTube video nke nke atụmatụ nkịtị egwú ruo mgbe music mgbanwe nke na-agba egwú na-a plethora nke ndị mmadụ na-eme iberibe ihe. Otú ọ dị, na nso nso Harlem shake emeela a ọhụrụ na-emekarị nke music dị ka Hip iwuli elu na soro music.
The Harlem Shake na oke itunanya captivated na Internet na-adịbeghị anya ka atọrọ ka mbụ sekọnd 30 nke Bauuer si "Harlem Shake", nke bụ a arọ bass instrumental track uploaded YouTube on August 23, 2012. The video amalite na naanị otu onye , onye a na-emekarị yi a nkpuchi, egwú na-"Harlem Shake", ka ndị ọzọ na ndị mmadụ ka na-eme ike ha azụmahịa dị ka ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eme. Ihe gbanwere nke a bụ na 15 sekọnd mgbe music mgbanwe, mgbe ahụ, ọ bụ pandemonium na onye ọ bụla ji ịgba egwú na imefe ekike na masks. Ụfọdụ mkpumkpu azụ ikuku, mgbe ndị ọzọ na-arụ Bernie; na twerk, ma ọ bụ ọbụna na mbụ version nke Harlem ịma jijiji. E nwere n'ezie ọ dịghị set iwu dị ka ihe na-akpali gị na-agba egwu obi gị si na.
Harlem Shake nwekwara nweela ihe karịrị otu nde echiche na YouTube; ụfọdụ vidio nke Harlem Shake aga malitere ịrịa na YouTube ruru ya na-akpali na kediegwu Nkea. Mgbe ndị ọzọ na eduba ọtụtụ ọdịiche na parodies onye ọ bụla si Norwegian agha, ka Ahụekere òtù, ka My Little inyinya, enyi bụ Ime Anwansi, na ọbụna ọrụ mmenyụ ọkụ n'ime ha gwongworo.
Mbụ, na-a video Igwefoto ma ọ bụ ezi ekwentị. Ị na-aga ka ịdekọ abụọ dị iche iche nke video; akụkụ mbụ bụ na ị n'ikwe n'ihu ndị mmadụ ndị ka. Akụkụ nke abụọ niile bụ nke unu n'ikwe ya.
The Harlem shake ga-sekọnd 30 mere na ọ pụrụ ịbụ na-akpali na kediegwu. Otú i nwere ime ihe nile Nkea n'ime sekọnd 30 na-agụnye ibe gị dancers ma ọ bụ enyi. Ị ga-mkpa a n'okirikiri ma ọ bụ goofy akụ na ndabere; ị ga-mkpa ekike n'ihi na ndị enyi gị dị ka masks.
Ke akpa 10 sekọnd-akpa àgwà nkịtị. Mgbe ahụ, ozugbo amalite na-eme nzuzu nke onwe gị kpamkpam na-amalite na-akpụ akpụ aka gị akpa ke otu direction, mgbe ahụ, pivoting gị otu ubu ndị a dị ka ị twerk na pope nke ọzọ ubu m, a n'out oge.
Mgbe na-eme na ka a ọnyà ma ọ bụ goofy music akụ jupụta ikuku n'ime gị ụlọ na-amalite na-akpụ akpụ gị elu akụkụ ahụ gị na ịma jijiji ahụ gị. Mgbe ahụ na-eti mkpu "Do Harlem Shake", ịnọ na nche enyi gị ndị ndibọhọ masks na-awụlikwa elu apụ ha oche iji sonyere ị na-eme yiri ozu Nkea ma ọ bụ ịma jijiji dị ka crazy.
Ke akpatre 10 sekọnd, na-eti mkpu ma na-eme niile crazy ihe n'ihu igwefoto ma ọ bụ-ege gị ntị dị ka ị imipu gị pelvis na mmanya gị n'úkwù.
1. Norwegian agha shake (Original Army Edition)
Nke a bụ mbụ Norwegian agha shake
Uploaded ụbọchị: February 10, 2013
Number nke Echiche: 101.963.177
2. The Fox- Harlem Shake
Italian na Vietnamese ndepụta okwu
Uploaded ụbọchị: September 3 2013
Number nke Echiche: 420.588.632
3. mee egwu harlem
Ndị na-arịọ maka zuru version ya mere ebe a na ọ bụ. Plus, ọ kwesịrị ya video
Uploaded ụbọchị: February 2, 2013
Number nke Echiche: 51.690.726
4. Harlem na shake- Homer shake
Ị hụrụ ndị ọzọ, ugbu a, na-ekiri ndị kasị mma. Ọ bụ simpson si Harlem shake
Uploaded ụbọchị: March 1, 2013
Number nke Echiche: 31.470.022
5. Harlem Shake (JCSP version)
Ekele YouTube maka ghọtara TSCS si meme nke Harlem Shake igba malitere ihe internet
Number nke Echiche: 26.586.881
6. Harlem Shake (World mbipụta)
Enwe emee ka anya doo site SINOKLY
Uploaded ụbọchị: March 6, 2013
Number nke Echiche: 11.743.948
7. UGA Ndị nwoke igwu mmiri & amaba Harlem Shake
UGA ndị igwu mmiri na amaba (video nke oge)
Uploaded ụbọchị: February 11, 2013
Number nke Echiche: 37.691.467
8. Harlem na shake V4 (firefighter version)
The Harlem na shake (Na kpọmkwem nke gị Ojiji Firefighters)
Uploaded ụbọchị: February 7, 2013
Number nke Echiche: 7.794.258
Ron na Lisa The Epic agbamakwụkwọ n'ọnụ ụzọ
Uploaded ụbọchị: March 24, 2013
Number nke Echiche: 3.236.398
10. Harlem Shake (Ahụekere Edition)
The Harlem Shake bụ ọbụna na-ibunye cartoons!
Number nke Echiche: 1.766.741
Top 25 YouTube Funny Channels Iji mee ka gị Day
> Resource> YouTube> Olee Ime Harlem Shake